Wonke umuntu uyazi ukuthi kunzima kangakanani ngomuntu ophelile iholide lakhe. Ngemuva kwalokho, izolo - inkululeko egcwele kanye nokungahleleki, kodwa namuhla kunezindaba eziphuthumayo, ukungabi nenkululeko nenqwaba yezinkinga. Ebonakala emsebenzini ngemva kokuphumula isikhathi eside, abaningi bavele "babambe ikhanda", bekhononda ukuthi kungcono ukuthi bangaphumuli nhlobo. Ngokuthakazelisayo, kodwa iqiniso lokuthi emva kwamasonto ambalwa okungazi lutho, sibhekene nempahla, asikho ithoni, i-vivacity nesifiso sokugubha izintaba, ngokuphambene nalokho, ukucasuka kuphela, ukukhanda ikhanda nokunganaki okuphelele. Lesi simo sengqondo sokusebenza kwengqondo sathi ukucindezeleka kokuphuma ngemuva kokukhishwa futhi, njengomthetho, kubheka ukuthi kungumphumela wemvelo wekhefu "elihlelekile".
Izimbangela zokucindezeleka kwe-postpartum nendlela yokubhekana nayo
Iholide elungile yilapho umuntu eshintsha kusuka komunye umsebenzi kuya kwesinye. Into ebaluleke kakhulu ukukwazi ukukhohlwa ngomsebenzi ngokujwayelekile. Futhi ekhuluma nabalingani bakhe, ehamba ekhanda lakhe, izikhathi ezisebenzayo, uvele uthathe amahora ayigugu okungazi lutho. Ngaphezu kwalokho, umthwalo ophindwe kabili - imizamo yokuphumula futhi ngesikhathi esifanayo ukuqhutshwa kwenqubo yokusebenza kuhlale kugcwele ukuhlukumeza kwezifo ezingapheli.
Inkinga yesibili ye-holidaymaker yisikhathi. Ngokusho kochwepheshe abaningi, kungcono ukuphumula kunokuphumula kancane kuncane. Ososayensi banqume ukuthi "ubuncane beholidi" kufanele kube amasonto amabili. Kulesi simo, isonto elilodwa lizoqhubeka livumelanisa nezimo ezintsha zomuntu (ukuguqula umbuso wosuku, futhi mhlawumbe isimo sezulu, kanye nezindawo zesikhathi). Iviki lesibili kungokwakho konke. Kulesi simo, kuyadingeka ukuthi ube nesinye isonto lokuphumula ekubuyiseleni - ukuvuselela kabusha, ngamanye amazwi, ukubuyela ezimweni zakudala zokuphila.
Enye iphutha elivamile liphumula "lenkampani." Ngokuvamile, isitayela sokuchitha isikhathi, ngeshwa, awukhethi, okungukuthi imvelo yakho. Esikhundleni sokujabula emvelweni, uhamba nabangani bakho ekuphumeni, noma, tshela, uhlakulele engadini yezwe, nakuba ungakwazi ukuma lo msebenzi. Kufanelekile ukufunda ukuphika ngokuqinile ngaphandle kwemizwa yamanga.
Kodwa-ke, uma ngabe uphumelele ukuchitha kahle iholide lakho bese ukhohlwa kuphela igama elithi "umsebenzi", izinkinga zingenzeka emsebenzini. Abanye bazama ngokushesha, futhi ngenkuthalo, ukuba bahlanganyele ekusebenzeni futhi ngokushesha baxazulule yonke imibuzo eqoqiwe.
Kodwa isipiliyoni sibonisa ukuthi awudingi ukusheshisa ukuthatha izinqumo ezibalulekile emva kokukhululwa ngosuku lokuqala - ama-gaffes angenzeka.
Ososayensi baseJalimane bathole ukuthi ngesikhathi sokuphumula kwentsha le nsizwa ingqondo yancipha ngamaphuzu angu-20. Futhi-ke, kubalulekile ukuzinika isikhathi sokuvuselela ukuhlakanipha. Futhi izazi zengqondo zithi ngokuqinile ukuthi ngosuku lokuqala lokusebenza, abasebenzi kufanele bavunyelwe ukusebenza kuphela isigamu sewashi. Lokhu kuyadingeka njengokuvimbela ukuhlukana okuhlukahlukene kwemizwa.
Isikhathi sokuya emsebenzini kufanele sibhekwe njengenkinga encane futhi kufanele kuthathwe ngokungathí sina. Phela, ngokusho kwezibalo, ukunganeliseki ngomsebenzi wabo, kanye nokuphila ngokujwayelekile, kubonakala kahle manje. Umuntu othanda kakhulu ibhizinisi lakhe, ngeke adideke isikhathi eside. Ososayensi bezengqondo baseSpain bakholelwa ukuthi abangaphezu kuka-35% wabantu bakithi bavame ukungena ekucindezelekeni kokukhishwa ngemva kokuphuma. Izizathu zalesi sigameko esiyinkimbinkimbi kubonakala ukuthi ama-5% kuphela aseSpanish anelisekile ngomsebenzi wabo. Ngakho-ke, kunesizathu sokucabanga, kodwa ingabe umsebenzi onjalo udinga ngokujwayelekile?
Akudingekile ukubheka ukucindezeleka kwangemva kokucindezeleka ngokuqondile njengobonakaliso obuthakathaka bethu. Iqiniso liwukuthi izinkinga ezifanayo nabantu abaqinile, abaphumelelayo nakho kwenzeka empilweni nasebhizinisi. Ezimweni eziningi, abameleli bomsebenzi ovulekile (abameli, izintatheli, odokotela) nabanikazi bamabhizinisi amancane banenkinga enjalo.
Ungabhekana kanjani nalokhu ukucindezeleka, uma kwenzeka kuwe? Iqiniso lokuthi kuyadingeka ukusebenza, liyakufanelekela ukuqonda, kodwa akudingekile ukuba usheshe ufike ezinsukwini zokubambisana, ngisho nokulimaza.
Kuyafaneleka ukuqala ngezinto ezilula ezingadingi ukunakwa, kanye nemizamo ekhethekile yengqondo. Isibonelo, ukutshela ozakwabo ngezikhathi ezimnandi zeholide, ukusabalalisa izikhumbuzo nokubonisa izithombe wuhlelo oluhle losuku lokuqala.
Indlu yakho ingcono ukuxwayisa ukuthi ukucasuka kwakho ngesimo sengqondo ngokuqondene nabo akuxhunywanga neze, kodwa ngokuphambene nalokho, udinga uthando nokusekelwa. Futhi endleleni, abantu abajabulayo emshadweni, abanezinkinga zokusebenza isikhathi bahlangabezana ngokushesha.
Futhi ngenkathi ungangeni ngesigqi esivamile, kubaluleke kakhulu ukuthola "imithombo enhle" yakho. Umuntu uphila futhi aduduzwe yizinyawo ezide, omunye umuntu - imidlalo yekhompyutha, njll, kanti ezinye ezitshalweni zehhovisi ziyi-gardentop encane yezitshalo zamatshe kanye namagilebhisi ezandleni zabo zizindla. I-charm yokukhulumisana komuntu nayo ayinqatshelwe, ikakhulukazi nabantu abakuhle kuwe. Kungcono ukuhlala kude nezihlobo ezinzima.
Ukuzivocavoca umzimba kunomthelela ekwenzeni ithoni. Futhi kuyadingeka nakanjani ukusunduza i-barbell ngesithukuthuku sobuso bakho noma ukuphefumula imibuthano nge-stadion. Kwanele ukuqala umzimba wokuzivocavoca. Isibonelo, ulele eseceleni, izandla zifakela ku-lock, bese uphakamisa umlenze wakho bese uhlala kule ndawo imizuzu embalwa. Futhi phinda lo msebenzi futhi 6-10. Lezi zingoma ezimangalisayo ezingenakuqondisisa, futhi zishisa ama-kilojoule engeziwe futhi ikuvumela ukuba ulethe imicabango ngokuhlelekile.
Futhi ukukhohlisa okunye - udinga ukuvuka ekuseni imizuzu engama-30 ngaphambi kokujwayelekile. Phela, lokhu kuzokunika isikhathi esengeziwe nje sokucubungula kabusha izindinganiso, ukujwayela isimo esisha.
8 izibonakaliso ukuthi akayena ojulile ngobuhlobo bakho
Imithetho eyishumi yegolide yokuxhumana
Isivivinyo: Ingabe umuntu uyakuthanda?
Ukuvalwa: izizathu nendlela yokubhekana nayo?
Ukunambitha okuvela uju
Okroshka ku-Bulgarian Tarator
Amaqanda nge-pie inhlanzi
Izimpawu zomshado kumkhwenyana nomkhwenyana: yini engakwazi futhi engenakwenziwa ukuze impilo ijabule
Isinkwa sokuqoqa umzimba
Izakhamuzi nge chocolate